ဘာသာရေး – Myitter
အိမ်တစ်အိမ်မှာ လာဘ်ပွင့် အိမ်အေးအောင် ဒါတွေ လုပ်ပါ (1) ဘုရားပန်း နှင့် သောက်တော်ရေ ဆွမ်း ဆီမီး အမြဲကပ်ပါ။ ဘုရားပန်း မနွမ်းပါစေနဲ့။ ဘုရားပန်းအိုးထဲမှ ရေများ မပူပါစေနဲ့။ သောက်တော်ရေကို သတိရတိုင်းကပ်ပါ။ (2)ဘုရားရှိခိုးလျင် အိမ်စောင့်နတ် ခြံစောင့်နတ် အိမ်ဝန်းအတွင်း မှီတင်းစောင့်ရှောက်နေထိုင်ကြသော နတ်မြတ်နတ်ကောင်းများ […]
February 23, 2018 Myit Ter 0
” သကြားမင်းရှိခိုး ခံရသူများ ” ၁။ ကြာမြင့်စွာကာလကထဲက မြတ်သော အကျင့်ရှိကြတဲ့ ရဟန်းသူတော်စင်များ။ ၂။ ပရဟိတ စိတ်ရှိပြီး ဒါန၀တ်ရှိတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။ ၃။ ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါး စသည်အားဖြင့် အကျင့်သီလ ရှိကြတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။ ၄။ […]
February 6, 2018 Myit Ter 0
မေတ္တာခမ်းနေသော ကမ္ဘာကြီး ——————————– တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်က တစ်ကောင်ကိုသတ်ဖြတ်နေရင်ဝင်ကူဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ဖို့ လောက်သာ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး… လူတဦးနဲ့ တဦး ရန်ဖြစ်နေရင်ုဖြန်ဖြေဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး fb တင်ဖို့ လောက်သာ ကြိုးစားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး… အရှင်လတ်လတ်စားမှ ကျမ္မာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာဆိုပြီး […]
၁၃၈၀(2018)ခုနှစ်အတွက် မဟာသင်္ကြန်စာ ဖတ်ချင်သူများအတွက်
January 25, 2018 Myit Ter 0
သိကြားမင်းသည် ၆၆(ဃ)ကိုစီး၍အုပ်နီခဲကိုကိုင်ပြီးလျှင် လူ့ ပြည်သို့ ကြွချီတော်မူ၏။ ဗြဟ္မာ့ ဦးခေါင်းသည် အိမ်မက်စုံရာမှမြန်မာအိုင်ဒေါကို ပြောင်းရွှေ့ရလတ္တံ့ . .။ ရက်ကို နေ့ စားသမားများ စောင့်၏။လမ်းကို စည်ပင်စောင့်၏။မြေကို အခွန်စောင့်၏။ စစ်တပ်သည် ခြေဥကိုစောင့်၏။လေကို ရဲစောင့်၏။မိုးလေဝသ ကို ဦးထွန်းလွင် စောင့်၏။ မီးနဲ့ရေကို ပြည်သူများစောင့်၏။မိုးကို […]
ဒါအချက်တွေကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းလေးစားမိသွားတာပါ
January 15, 2018 Myit Ter 0
ဗုဒ္ဓကို ကျွန်တော် အရမ်းလေးစားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ………… ဗုဒ္ဓဟာ ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကို သူပိုင်တယ်လို့ မကြွားခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို ကိုးကွယ်ရင် ……… ဆုလဒ်တွေ ပေးမယ်လို့ မစည်းရုံးခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို မရှိ်ခိုး မကိုးကွယ်ရင် ……… ငရဲပြည် ပို့ပြစ်မယ်လို့ မခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ကို […]
ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင် မယ်
ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင် မယ် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတော့ ပုတ်ရဟန်း မင်းကြီးကတရားဝင်မကြော်ငြာဖို့ခေါ်ပြောသတဲံ့သူပြောလိုက်မှပဲ တကမ္ဘာလုံးက ပိုပြီးသိသွားရတယ် မပြောရင်တောင် ဒီလောက်သိမှာမဟုတ်ဘူး အိန္ဒိယနိုင်မှာမှာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ်ပြောင်းလဲတာ များလွန်းလို့ လွှတ်တော်ခေါ်ယူရတဲ့အထိကို ဖြစ်သတဲ့ အာဖရိကတိုက်မှာလည်း တရားစခန်းတွေယဉ်ကျေးလိမ္မာတွေ တောင် အများကြီးဖြစ်နေပြီတဲံ့ အမေရိကန်မှာလည်း တရားထိုင်ဖို […]
December 30, 2017 Myit Ter 0
အံ့သြလွန်ပြီး သေသွားလိမ့်မယ် ————- မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ ကျော်ရှိပါတယ် လူတွေစောင့်ထိမ်းအိပ်တဲ့ငါးပါးသီလမလုံခြုံတဲ့သူ များပြီး လုံခြုံတဲ့သူဟာ ၁၀ ရောက်တရောက်နုန်းမရှိပါဘူး။ ရဟန်းသံဃားအရေအတွက် ၆ သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ် အကျင့်ပျက်ရဟန်းဟာ နည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ် မပြောပလောက်ပါဘူး ဘုရားရှင်လက်ထပ်ကတောင်ဆဗ္ဗဂီရဟန်းဆိုပြီး အကျင့်ပျက်ရဟန်းတော်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သာမန်သိက္ခာပုဒ်တွေကျုးလွန်တဲ့ ရဟန်းမျိုးကတော့အနည်းနဲ […]
သရဏဂုံစွမ်းရည် အသက်ရှည် ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဖတ်ကြည့်စေချင်)
December 24, 2017 Myit Ter 0
ဒေါ်ခင်မေ နေထိုင်သည်က ရွှေပြည်သာမြို့၊ ၅/၅-ရပ်ကွက်၊ နှင်းဆီပန်းခြံ။ ယခု ဒေါ်ခင်မေအသက် ၆၀-ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ “သရဏဂုံသုံးပါးမစွဲမြဲခဲ့ရင် အဒေါ့်အသက်ဟာ ၄၀-လောက်ကတည်းက သေနေပါပြီ” ဟု ဒေါ်ခင်မေက အိမ်နီးချင်းများကို မကြာခဏ ပြောပြလေ့ရှိသည်။ ဒေါ်ခင်မေ ပြောပြမည် ဆိုလျှင်လည်း ပြောပြချင်စရာပင်။ ဒေါ်ခင်မေအသက် ၄၀-အရွယ်ခန့်က သေလုမျောပါး ရောဂါတစ်ခုဖြင့် […]
ဘုန်းကြီး တရား ဟောနေစဉ် တရား နာရောက်လာသည့် စပါးကြီးမြွေ…!
December 21, 2017 Myit Ter 0
ဘုန်းကြီး တရား ဟောနေစဉ် တရား နာရောက်လာသည့် စပါးကြီးမြွေ…! ထိုင်းနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဆရပူရီခရိုင် ဆရပူရီမြို့ မယ့်ထမ့်ခေါင်ကျောက်ကျောင်းတိုက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်စောစောက တရား ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ကြစဉ် စပါးကြီးမြွေတကောင် ရောက်လာပြီး တရားနာသွားခဲ့ပါတယ်။ တရားအဲဒီမနက်က ကျောင်းဝင်းထဲမှာ သံဃာတော်တွေ ထိုင်ပြီး […]
” မိမိကိုယ် ကို မိမိ.. သောတာပန် ဖြစ်တာ ဘယ်လိုလုပ် သိမလဲ “
ဝိပဿနာ ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ဟာ ခုလို ကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြယင်း၊ တစ်ဖက်ကလည်း ဗုဒ္ဓစာပေ တွေ လေ့လာဖတ်ရှုကြ ၊ တရားတော် တွေ ကို နာကြားကြတဲ့အလျောက် ယခင်က စ စခြင်း တရားအားထုတ်ခါစ ထက် တရားဓမ္မနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ အသိဉာဏ်တွေဟာ ပို၍ပို၍ တိုးပွားလာတယ် […]